एकल चरण असिन्क्रोनस मोटर, यांत्रिक ऊर्जा मा विद्युत ऊर्जा धर्मान्तरित कि यसको सापट मा एक विज्ञप्ति टोक को रूप मा एक मिसिन छ। यसलाई किनकी, चुच्चो गति वृद्धि यसको लोड घट्ने भएको घुमाउँदा क्षेत्र आवृत्ति पछि द्वारा आफ्नो नाम पायो। यी गति बीच फरक पर्ची भनिन्छ।
यो असिन्क्रोनस हुन्छन् एकल-चरण मोटर, को स्टेटर र रोटर - साथै सबै बिजुली कार, दुई मुख्य भागहरु को। भित्र टर्मिनलमा बक्स, शरीर को लागि निश्चित, निष्कर्ष, विभिन्न तरिकामा संकेत गर्नुभयो। चार तिनीहरूलाई को, र तिनीहरूलाई सही जडान गर्न, तपाईं तार दुई जोडी प्रत्येक उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ।
सामान्य तीन चरण असिन्क्रोनस बिजुली मोटर एकल चरण मोटर बाट coils र आफ्नो कन्फिगरेसन विभिन्न नम्बर हो। दुई तिनीहरूलाई को, र तिनीहरूले नै छैन। प्राथमिक एक घुमाउँदा चुम्बकीय क्षेत्र अण्डाकार आकार सिर्जना गर्न डिजाइन घुमावदार।
आदर अतिरिक्त एउटा सही कोण मा एक अतिरिक्त वा सहायक तार, उत्पन्न टोक, को रोटर को थालनी परिक्रमा दिनकै आवश्यक छ। कारण एक विद्युत घुमावदार excites चुम्बकीय क्षेत्र भन्ने तथ्यलाई यो तत्व आवश्यकता सन्तुलन अक्ष स्थिर रहन्छ, र यसैले जो, ठाउँ बाट रोटर सार्न अतिरिक्त प्रयास आवश्यक छ। यसको अण्डाकार फारम र यो परिक्रमा योगदान एक जो विपरीत दिशा दुई परिपत्र क्षेत्रहरू, योगफल प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ, र अन्य उसलाई अनुमति दिन्छ। तीन-चरण भन्दा धेरै बुरा, तर एक सपाट वा घरमा यो कमी संग राख्न यस कारण लागि यस्तो मिसिन को विशेषताहरु।
नियम, एकल-चरण असिन्क्रोनस मोटर - कार कम शक्ति तपाईं विद्युत घरेलू उपकरण को लागि सबै भन्दा अक्सर प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण हेयर ड्रायर, भ्याकुम क्लिनर, कफी Grinder वा खाद्य छन्। मोटर्स को यस प्रकारका समस्या तिनीहरूले कुनै विकल्प व्यावहारिक झनै देखि, सामना राम्रो।
एकल-चरण प्रेरणा मोटर जडान डिजाइन को विशेष परिणामस्वरूप यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। तथ्यलाई कि सुरु तार लगातार कार्यका लागि डिजाइन गरिएको छैन छ। चालु अल्पकालीन सञ्चालन बनेको मिसिन। को काम सेट पछि कोणीय गति श्रृंखला थप excitation क्षेत्र खोल्न पर्छ, अन्यथा यो खतरनाक तात्दै र सम्भव विफलता हुनेछ। सामान्यतया कुनै अधिक तीन पाँच सेकेन्ड समय सुरु। विच्छेदमा या त स्वयं वा स्वतः (को interrupter प्रयोग (बस बटन "सुरुवात" जारी) गर्न सकिन्छ घडी रिले)। सबैभन्दा परिष्कृत प्रणाली क्षण मा बूस्टर तार असक्षम भएको असिन्क्रोनस एकल-चरण मोटर एक मूल्याङ्कन गति पुगेपछि लागि डिजाइन अपकेंद्र उपकरणहरू छन्।
अतिरिक्त घुमावदार र सुरु बटन साथै त्यहाँ एकल-चरण प्रेरणा मोटर घुमाउन बनाउन आवश्यक अर्को तत्व हो। जडान योजना प्रदान गर्दछ एक श्रृंखला जडान चरण पारी सुनिश्चित, एक अनुगम सर्किट संग। सामान्यतया, यो संधारित्र, विद्युत वर्तमान सदिश भोल्टेज सदिश आदर निर्देशन परिवर्तन जो मार्फत खण्डमा समयमा।
6-पुस्ता लडाकु। लडाकू जेट: तस्बिर र विनिर्देशों
केबल VVG। विनिर्देशों र मोडेल को सुविधाहरू
कन्टेनर स्टेशन भरने। मोटर पेट्रोल स्टेशन, कन्टेनर प्रकार
प्राविधिक विशेषताहरु डकिंग वाहक बेल्ट
हामी रूस मा Volsky सिमेन्ट बिरुवाहरु चाहिन्छ?
फाइबर पलिएस्टर को गरे। पलिएस्टर फाइबर को उत्पादन
Onegin र Pechorin को तुलनात्मक विशेषताहरु। Onegin र Pechorin बीचको एउटा तुलना
गर्भवती महिलाका लागि पूल: गएर यो लायक छ? कसरी गर्भवती महिला लागि पूल मा अभ्यास सञ्चालन गर्न?
CISS - यो के हो? CISS संग MFP। CISS कसरी स्थापना गर्ने? स्थापना निर्देशन CISS
कलेजो र अग्न्याशय लागि आहार
दबाव वाशर - हाम्रो compatriots समीक्षा
Alois Brench: Filmography र जीवनी
ऋण संग्रहकर्ता बेचिएको: बैंक गर्न सही छ कि छैन भनेर? म ऋण संग्रहकर्ता बेचिएको छ भने के गर्नुपर्छ?
लाभांश - आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गर्न कुनै तरिका
ग्राहक समीक्षा: "JEELEX पानी जेट" पम्प
छुट्टी मा नशे को लागि कसरि?
Barbra Streisand: Filmography ठूलो गायक र अभिनेत्री। Barbra Streisand संग सिनेमा
आफ्नै हातले बगैंचामा लागि विचार: हामी लगाए आफ्नै बगैचा, आफूलाई सजाउनु